Banyere Anyị - Hangzhou Dongshen Machinery Engineering Co., Ltd.
Anyị na-omenala-eme EPS Ebu maka ọzọ ika EPS igwe si Germany, Korea, Japan, Jordan wdg
Ọrụ ọzọ dị mkpa anyị bụ EPS raw material production line. Anyị nwere ndị ọrụaka ọrụ aka ọrụ iji chepụta osisi EPS, iji nye usoro izizi mbụ maka mmepụta EPS, ma lekọta ọrụ EPS resin na saịtị. Anyị na-enye akụrụngwa niile maka ịmịpụta ngwa EPS, dị ka ndị ọrụ EPS, ndị na-asa EPS, EPS sieving wdg. Anyị nwere ike ịme omenala EPS akụrụngwa dị ka ikike onye ahịa chọrọ. Anyị na-enyekwa kemịkalụ kemịkalụ maka ịmịpụta EPS chaplet, dị ka HBCD, DCP, BPO, mkpuchi n'ụlọnga wdg. Anyị emeworị ọtụtụ ọrụ EPS zuru oke maka ndị ahịa ụlọ na ndị ofesi.
Oge ụfọdụ anyị na - enyere ndị ahịa aka ị nweta ngwongwo ha rịọrọ maka ya. N'ihi ime ihe n'eziokwu na ibu ọrụ anyị, ọtụtụ ndị ahịa na-arụrụ anyị ọrụ ihe karịrị afọ iri. Ha tụkwasịrị anyị obi, n'ihi ya, ha na-emeso anyị dị ka ụlọ ọrụ ha na-eweta ihe enyemaka na China. Anyị na-enyere ha aka ịchọta ezigbo ndị na-eweta ngwaahịa ma na-enyocha ha nke ọma mgbe ọ na-esiri ha ike njem. Anyị na-atụ anya nkwado ogologo oge, anyị na-ejikwa mmekọrịta anyị na onye ọ bụla ahịa egwu egwu.